Akụkọ - A kpọrọ NEWYEA Group ka ọ bịa na 2021 Internet of Things Wind Direction Carbon Zero Summit iji kparịta ohere ọhụrụ maka mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
A kpọrọ otu NEWYEA ka ọ bịa na 2021 Internet of Things Wind Direction Carbon Zero Summit iji kparịta ohere ọhụrụ maka mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Na Julaị 8,2021, "2021 Internet of Things Wind Direction Carbon Zero Summit", nke Xiamen Development na Reform Commission na Xiamen Bureau nke Industry na Information Technology na -eduzi, yana nkwado nke otu ụlọ ọrụ nyocha nke atọ nke akụ eke eke na nhazi. Kọmitii China International Internet of Things Expo, emere na Xiamen. Akpọrọ Dr. Lin Guijiang, onye isi oche otu Xiamen NEWYEA Group ka ọ kwuo isi okwu wee soro ndị ọkachamara n'ọhịa AloT, nnukwu data na itinye ego ụlọ ọrụ iji nwee mkparịta ụka dị mkpa na "ịkwalite mgbanwe akụ na ụba na imepe akụ na ụba ikuku carbon". ma kwuo maka ohere ọhụrụ nke ụlọ ọrụ AloT n'okpuru ndabere "ebumnuche carbon" abụọ na China.
Na nzukọ a, Dr. Lin Guijiang, n'isiokwu nke "Carbon Zero Smart Energy Technology Innovation", wepụtara ọrụ mbenata mgbapụta na nnukwu ohere ahịa nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-akwado n'okpuru ihe mgbaru ọsọ carbon abụọ. O kwuru na ugbu a n'okpuru usoro nke ọnụ ọgụgụ kacha elu carbon, ire ụgbọ ala ike ọhụrụ na -arị elu, a na -atụ anya na ọ ga -abawanye na 2040, ntinye ụgbọ ala eletrik ga -eru 100% na 2045, site na 2060 ga -eweta ntinye ego ọhụrụ na 2060; na dị ka data ahịa si kwuo, ngụkọta nke nde nde chajị nde 500 ga -agafe na 2060. Mbanye ngwa ngwa nke ụgbọ ala eletrik abụrụla isi ihe na -ebubata mkpofu ikuku carbon; yana mmepe na owuwu nke ahịa azụmaahịa carbon, ga -aga n'ihu na -akwalite njikọta nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala ike ọhụrụ na teknụzụ imepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ, na -emepụta uru ahịa enweghị atụ.
Ndị otu NEWYEA na-ewepụta ma na-ewulite usoro ike ọhụrụ na ike ọhụrụ dị ka isi ahụ, wee wuo sistemụ ike dị ọcha, obere carbon, nchekwa na arụmọrụ. Ọ ga-ejikọ ihe ọhụrụ teknụzụ na ọnọdụ njikọta nke ike imepụta, nchekwa ike, chaja na ike dijitalụ na akụ ike, wee duru mgbanwe usoro akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na obere carbon nke ike na ike.
N'otu oge ahụ, n'ụbọchị ọgbakọ ahụ, ndị isi dị mkpa sitere na ụlọ ọrụ na mahadum karịrị iri abụọ n'ofe mba ahụ gara n'isi ụlọ ọrụ NEWYEA Group maka nleta na mgbanwe. Dr. Lin Guijiang wepụtakwara usoro mmepe nke NEWYEA Group n'ime afọ gara aga, wee webata ngwaahịa ndị yiri ya nke ụlọ ọrụ na -akwụ ụgwọ nwere ọgụgụ isi. Ndị ọrụ dị mkpa na -ahụ maka ụlọ ọrụ na mahadum niile amatala usoro mmepụta na mmepe nke NEWYEA Group.
Na mgbakwunye, tupu "Ntanetị nke Ihe Ọkụ ikuku Carbon Zero Summit", na 2 nke ọnwa a, Zhangzhou Intelligent Manufacturing Industry Promotion Association na -enwe nzukọ mmemme ncheta na nzukọ kansụl nke abụọ nke mbụ. N'otu ụbọchị ahụ, Dr. Lin Guijiang, dị ka onye isi oche nke Zhangzhou Intelligent Manufacturing Industry Promotion Association, mere akụkọ banyere ọnọdụ mmepe nke mkpakọrịta nkwalite n'afọ a.